Rasaasa News – Somalia: Dhacdadii Gabiley oo Dheeha ka Qaaday Maamulka Somaliland
on April 14, 2014 11:49 am
Hargeysa, Apr 14, 2014 – Dawlada Atobiya ayaa caga-juglayn xoog leh ku samaysay maamul gableedka Somaliland, ka dib kolkii rag ka tirsan sirdoonka Atobiya si xun loogula dhaqmay magaalada Gabiley.
Labo nin oo ka tirsan ciidanka sirdoonka Atoobiya ayaa todobaadkii hore lagu qabtay magaalada Gabilley, halkaas oo si xun loogu garaacay, dabadeedna la xidhay. Raga la xidhay ayey ciidanka Booliska maamulka Somaliland waydiiyeen Aqoonsi, ragan ayaa diiday in uu tuso aqoonsi Booliska, sidaasna lagu qabtay.
Sida laga soo xidhtay Booliska Gabiley, labadan nin oo lagu kala magacaabo Tsegaye iyo Sabat, waas saraakiil waxayna Somali ku caayey Booliska, kolkaas ayey Boolisku cadhoodeen. Booliska maamulka ayaa si aan gabasho lahayn oo uu ciil ka buuxo u garaacay sirdoonka Atobiya.
Wakiilka Atoobiya u jooga Hargeysa Brigadier General Berhe Tesfaye, ayaa labo maalmood ka dib ka warhelay in rag ka tirsan siroonka Atobiya ku xidhan yihiin Gabiley. Generalka ayaa dad u diray Booliska Gabiley si loo siidaayo raga la lahayo, laakiin Boolisku way diideen in ay siidaayaan. Wakiilka ayaa arinta gaadhsiiyey madaxda maamulka Somaliland, waxaana markiiba tagay Gabiley Cabdiraxmaan Saylic madaxwayne xigeenka Somaliland oo ka siidaayey Booliska labada nin ee sirdoonka ah.
Saylic ayaa safar deg deg ah ku tagay Addis Ababa, isaga oo wada qoraalo raali galin ah iyo in ay ka xun yihiin waxa dhacay. Cabdiramaan Salici oo warbaahinta la hadlay ayaa erayo Somali ah ku yidhi “Bi,iaadam baan nahay waan khaldanay, mardambana dhici mayso sidani, kuwii arinta sameeyey waan xidhnay, shaqadiina waan ka caydhinay, Atoobiya raali ha ahaato, anagaa khaldanay.”
Ergada Cabdiraxmaan Saylic, Atobiya way diiday, waxayna u sheegtay in uu yahay Gadabuursi, laakiin ay u baahan yihiin Beesha Isaaq ee masuulka ah. Sidaasi waxaa mar labaad Addis Ababa ku tagay wasiirka arimaha dibada ee maamulka Somaliland Biixi Maxamed Yoonis, oo sida qoraalo raali galin ah oo ay ku saxiixan yihiin dhamaan madaxda maamulka Somaliland. Biixi Maxamed Sooyaan waxaa si wanaagsan u qaabilay wasiirka arimaha dibada Atobiya Dr. Tedros Adhonam.
Atobiya, waxay hakad galisay xidhiidhka ka dhaxeeya maamulka Somaliland, waxaana la adkeeyey isu socodka xuduuda u dhaxaysa Somaliland iyo Atobiya.
Dhinaca kale waxaa magaalada Jijiga laga daabulayaa wufuuda ka qaybgalaysa shirka ka dhacaya magaalada Buuhoodle ee maamulka Khaatumo. Arintaas oo uusan maamulka Somaliland waxba ka odhan qaban qaabadiisa.
Maamulada ka jira Somaliya dhamaantood waxay ka amar qaataan Atobiya, ciidamada sirta iyo kuwa milatariga Atobiya ayaa sida ay doonaan isga maamusha cariga Somalida. Masuuliyiinta Somalida ayaan wax hadal ah iyo ka hor imaad toona samayn karin, wax kasta oo ay Atobiya ku samayso.